June 21, 2020 941
मेष :- आफन्तहरू तपाईंलाई सहयोग दिन तयार हुनेछन्। यस दिन तपाईं वरिपरि गुलाबको खुशबू हुनेछ। प्रे’मका परमानन्दको आनन्द लिनुहोस्। विवाह पछि पाप उपासना हुन्छ, र तपाईंले आज धेरै उपासना गर्न सक्नु हुनेछ।
वृष राशिफल:- रचनात्मक कार्यले तपाईंलाई त’नाउमुक्त राख्नेछ। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। यो प्रेमको लागि तपाईंको भाग्यशाली दिन हो। तपाईंको प्रेमीले तपाईंको लामो प्रतीक्षा गरेका कल्पनाको बोध गराउनेछन्। आफ्नो जो’डीले आज तपाईंलाई केही साँच्चै सुन्दर कुराले आश्चर्य गराउनेछन्।
मिथुन:- आफ्नो आहारको विषयमा उचित ध्यान राख्नुहोस् र अधकपालीका विरामीहरुले विशेष गरेर खाना खान बिर्सिनु हुँदैन अन्यथा तिनीहरूलाई अनावश्यक भावनात्मक तनाउ हुन सक्छ। तपाईं आफ्नो दिनको लागि बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै खर्च गर्ने झुकावमा विचार गर्नुहोस्।
अरूलाई प्रभावित गर्ने तपाईंको क्षमताले फाइदा पुर्याउनेछ। आज समय, काम, पैसा, साथीभाइ, परिवार, आफन्त; सबै एक पक्षमा र आफ्नो साथीसँग तपाईं अन्य पक्षमा, सबै एक-अर्कामा हुनेछन्। कार्यक्रमहरू राम्रा र समस्यापूर्ण हुने दिन – जसले तपाईंलाई भ्रमित र थकित छोड्नेछ। तपाईंलाई आफ्नो जो’डीले हेप्नेछन् र यसले गर्दा तपाईंले विवाह जबरजस्ती तोड्न सक्नुहुन्छ।
कर्कट:- कार्यस्थलमा वरिष्ठबाट दबाव र घरमा कलहले केही तनाउ ल्याउन सक्छ – जसले तपाईंका कामको एकाग्रतामा बाधा पुर्याउन सक्छ। मित्रहरू सहयोगी र अत्य’धिक मद्दतगार हुने’छन्। तपाईंला आफ्नो प्रिय फोन गर्नेछन्, यसैले यो राम्रो दिन हो। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
सिंह :- समग्र स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ तर यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण साबित हुनेछ। आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण राख्नुहोस् किनकि यसले तपाईंका हजुरबा हजुरआमाको भावना’मा चोट लाग्न सक्छ। फतफताएर आफ्नो समय बर्बाद गर्नुभन्दा मौन बस्नु राम्रो हो। हामी समझदार गतिविधिहरुको माध्यमबाट जीवनको अर्थ दिन्छौं भनेर बुझ्नुहोस्। तिनीह’रूलाई तपाईंले ध्यान राख्नुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। कुनै बाह्य पक्षले तपाईं र तपाईंको जोडी बीच मतभेद सिर्ज’ना गर्ने प्रयास गर्न सक्छ, तर तपाईंहरू दुवैले यसलाई समाधान गर्नु हुनेछ।
कन्या :- आफ्नो स्वास्थ्य बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्। यो रोग विरुद्ध शक्तिशाली खोप हो। तपाईंको सही मनोवृ’त्तिले गलत मनोवृत्तिलाई हराउनेछ। तपाईं पार्टी’को योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना’ राम्रा मित्रहरूलाई निमन्त्रण गर्नुहोस् – त्यहाँ तपाईंको जयकार गर्ने धेरै मान्छे हुनेछन्। तपाईंले आफ्नो जीवन भन्दा बढी तपाईंलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति भेट्नु हुनेछ। तपाईंका वरिप’रिका मानिसहरूलाई यस्तो काम गर्न सक्नेछन् जसले गर्दा तपाईंको जीवनसाथी फेरी तपाईंमा स’मर्पित हुनेछन्।
तुला:- धेर नखानुहोस् र तन्दुरूस्त हुनको लागि नियमित रूपमा स्वास्थ्य क्लब जानुहोस्। परिवारमा तपाईंको हावी मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न सही समय हो। जीव’नको राम्रो र नराम्रो कु’राहरू बाँट्न तिनीहरूसँग घनिष्ठ सहयोगमा काम गर्नुहोस्। तपाईंको परिवर्तित मनोवृत्तिले तिनीहरूलाई असीमित आनन्द दिनेछ। यो अचम्म’को दिनमा तपाईंका सम्ब’न्धमा भएका ती सबै उजुरी र ईर्ष्या अचानक हराउनेछन्। आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ!
वृश्चिक :- कुनै संत झैं व्यक्तिको आशिषले मनोशान्ति दिनेछ। आफ्नो ठूलो पार्टी सबैलाई लिनुहोस् – आज तपा’ईंसँग आफ्नो समूहको लागि कार्यक्रम संग’ठित गर्ने ऊर्जाको अतिरि’क्त मात्रा हुनेछ। कसैले पनि तपाईंको प्रेम अलग गर्न सक्ने छैन। तपाईंले सामा’जिक मिडियामा वैवाहिक जीवनका ठट्यौली’हरू पाइ राख्नु हुन्छ, तर आज तपाईं आफ्नो वैवाहिक जीवन बारेमा अचम्म लाग्ने सुन्दर तथ्य आफ्नो अगाडि आउँदा साँच्चै भावुक हुनु हुनेछ।
धनु :- केही मनोरञ्जनको लागि आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किने प्रयास गर्नुहोस्। भेटघाट गर्ने अतिथिहरूले सांझ बिताउनेछन्। “आज, तपाईंले आफ्नी प्रियतमाले तपाईंलाई कति प्रेम गर्छिन भन्ने महसुस गर्नुहुनेछ।” आज यात्रा-मनोरञ्जन र सामाजिक क्रियाकलाप तपाईंको एजेन्डामा हुनेछ। तपाईंका जीवनसाथीको आन्तरिक सौन्दर्य आज बाहिर निस्किनेछ।
मकर:- तपाईंको धैर्यलाई लगातार प्रयास’को साधारण अर्थमा र समझसँग राख्नु’होस् जसले तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी रहनेछ। तपाईंको साथीहरूले तपाईं’को उदार व्यवहारको फाइ’दा नलिउन। तपाईं विपरीत लिंगीहरूको लोकप्रिय र सजिलै आकर्षित सदस्य हुनुहुनेछ। लामो समय पछि, तपाईं र तपाईंको जोडीले कुनै झगडा र तर्क बिना केवल प्रेम साथ शान्तिमय दिन बिताउनु हुनेछ।
कुम्भ:- मित्रहरूले तपाईंलाई कोही विशेष ‘व्यक्तिसँग परिचय गराउनेछन् जसले तपाईंको विचा’रमा केही उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ। परिवारका सदस्यह’रूले तपाईंको आशा पूरा गर्न सक्ने छैनन्। तिनीहरूलाई तपाईंको ढड्डी र लहडी पारामा काम गरा’उने आशा नगर्नुहोस्, बरु शैली परिवर्तन गराउने प्रयास गर्नुहोस् । प्रेमको खुशीयाली अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ। आज आफ्नो जोडीले तपाईं’लाई स्वर्ग पृथ्वी’मा नै छ भन्ने महसुस गराउने छन्।
मीन:- बाहिरी गतिविधि’हरूले तपाईंलाई लाभ दिनेछन्। गढ जीवन शैली मन पराउनु र सधैं सुरक्षा बारे सोच’ले तपाईंको शारीरिक साथै मानसिक उन्नतिमा हानि पुर्याउनेछ। यसले तपाईंलाई एउटा त्रसित व्यक्ति बनाउनेछ। परिवार’को गोप्य समा’चारले तपाईंलाई आश्चर्य बनाउन सक्छ। तपाईंको समर्पित र शुद्ध प्रेममा रचनात्मक शक्तिको जादू छ। तपाईंको जोडीले थाहै नपाई साँच्चै शान’दार केही कुरा गर्नेछन् जुन अविस्मरणीय हुनेछ।
Prevकुन प्रदेशबाट कतिखेर देखिन्छ आज लाग्ने सूर्यग्रहण ? हेर्नुहोस्…
Nextबिना अपरेशननै एकै पटक ४ सन्तान जन्माएर चर्चा कमाएकी सवनम कोरोनासगँ भने हारिन..